INDHO-FIIQIS LACAG LA’AAN AH OO KA SOCOTA ISBITAALKA BUUHOODLE |
Qalliin indho-fiiqis ah oo lacag la’aan ah ayaa maalintii saddexaad ka socda isbitaalka degmada Buuhoodle ee gobolka Togdheer. Howsha oo ay fulinayaan dhaqaatiir ka socota Hay’adda La-dagaallanka Indho-la’aanta ee Geeska Afrika ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ayaa socon doona muddo labo toddobaad ah. Waxaa ilaa iyo hadda ka faa’iideystay dad dhan 50 qof oo aan horay wax u arki jirin.
Dadka indhaha loo fiiqay waxaa ka mid ah Cali Maxamed oo ah 70 sano jir muddo shan sano ah aragga la’aa. Wiilkiisa ayaa ka keenay tuulada Banyaal oo Buhoodle u jirta qiyaastii 30 km. “Waa la i waday oo gacanta ayaa la i hayay markii hore, haddase cidna gacanta ima hayso. Dadka oo dhan, baabuurta, dhagaxda, wax kasta waan arkayaa. Aad baan ugu faraxsanahay inaan adeeggan helo,” ayuu yiri Cali.
Wuxuu hadda sugayaa in loo fiiqo isha labaad ee midig markaas oo haddii lagu guuleysto qalliinka uu awoodi doono in uu si buuxda labadiisa indhood wax ugu arko. Cali wuxuu xusay in awooddiisa dhaqaale oo koobneyd darteed uu awoodi kari waayay inuu dhaqtar booqdo muddadii shanta sano ahayd ee uu indho-la’aanta wehelka u ahaa.
Qalliinkan indhaha ee lacag la’aanta ah ayay bukaannada qaar uga imaanayaan tuulooyin fogfog kaddib markii ehelahooda jooga Buuhoodle ay ku wargeliyeen adeegga caafimaad ee socda. Saafi Faarax oo ah hooyo lixdan sano jir ah muddo 7 saac ah ayay u soo socotay magaalada, iyada oo ka timid tuulada Qori-lugud si ay uga faa’iideysato indho-fiiqista lacag la’aanta ah. Muddo labo sano ah ayay aragga la’eyd. Weriyaha Raadiyo Ergo oo qalliinka kaddib ku booqday isbitaalka ayay u sheegtay inay ku faraxsan tahay araggeeda dib ugu soo noqday.
“Aad baan u ladanahay aad buu u qurux badan yahay araggaygu, sow anigaa ku arka! Markii hore inuu qofku nin yahay ama dumar ma kala arki karin, hadda waa aniga ku arka ee xataa farahaaga arka shantiiba,” ayay tiri Saafi.
Maamulaha Isbitaalka Buuhoodle, Dr. Maxamed Shiine ayaa Raadiyo Ergo u sheegay in labada toddobaad ee ay howsha socoto ay hiigsanayaan inay indhaha u fiiqaan ugu yaraan 200 oo qof. Wuxuu ku boorinayaa dadka ku nool miyiga gobolka Togdheer iyo deegaannada u dhow in ay isbitaalka keenaan ehelahooda u baahan indho-fiiqista.
Qalliinkan oo ay sameynayaan labo dhaqtar oo ku takhasusay indho-fiiqista oo ka yimid magaalada Muqdisho ayaa ah kii ugu horreeyay ee noociisa ah ee muddo 8 sano ah laga fuliyo degmada Buuhodle oo aan lahayn isbitaal ay ka howlgalaan dhaqaatiir fulisa howlaha indho-fiiqista.
← Madaxweynaha oo dhiira geliyay Ciyaartoyda Soomaaliya uga qeyb galay Tartanka Olimbikada
CARRUUR KA KALLUUMEYSATA XEEBTA BOOSAASO →